Ukuhlola nokugxeka i-gvSIG 1.9 - i-Geofumadas
Ukuhlola nokugxeka i-gvSIG 1.9
Disemba, 2008 I-GvSIG, Innovations
Muva nje kwakunjalo umemezele inguqulo ye-1.9 ye-gvSIG ku-alpha version, ngemva kokuvivinywa nganquma ukushiya okunye ngaphambi kokuyikhohlwa:
Es kungenzeka ukulanda kokubili inguqulo edingekayo, enesisindo se-103 MB ye-Windows ne-116 MB ye-Linux. Lokhu kungcono okuhlukile uma ungenayo ukufakwa kwe-1.3, uma unokusebenza okusebenzayo ungalanda inguqulo edingekayo ehamba nge-80MB.
I-1.9 version yekhodi nayo iyatholakala.
Ngilande le nguqulo ngaphandle kokudingeka kuqala futhi kwenzeke kimi ukuthi ukufakwa kungilenga kimi ngomlayezo:
java.io.I-FileNotFoundException: C: Amadokhumenti nezilungiselelo ...
Kubonakala sengathi lokhu kwenzeka ngoba ezinye izindawo kufanele zinikezwe i-Java, lezi zingase zibe ngamalungelo kuya kusignesha ekhadini lokufa, ukuze ungangicindezeli kangcono ngiye ngisusa izinguqulo ezikhona. Khona-ke lapho ngigijima ukufaka futhi ngikucela ukuba uhlole uma udinga izidingo futhi ufake uhlelo olufanele lwe-Java ... ngakho konke kuhambisane kahle.
Uma ngifaka, angizange ngidale isithonjana kwideskithophu, noma kwimenyu yokuqala (nakuba ngicabanga ukuthi wangicela uma ngifuna, futhi ngithi yebo), ngakho-ke kwadingeka ngidale isinqamuleli lapho ifakiwe khona.
C: Izinhlelo FilesgvSIG_1.9_alphabingvsig.exe
Lokhu, "ikhophi" lenziwa kufayela, bese "unamathisela isinqamuleli"
Lapho evula iphrojekthi ekhona, ungithumelele umlayezo ohlambalazayo, ngokusobala ngenxa yohlobo lwe-projection ... kodwa angicabangi ukuthi kuyiphutha lokuhlala njalo.
Ukudidiyela iphutha operation: + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = -3.0 + k = x_0.9996 0 + = 500000.0 + = 0 + y_0.0 ellps = Eziya = m + units + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = - 87.0 + k = x_0.9996 0 + = 500000.0 + = 0 + y_0.0 ellps = WGS84 + WGS84 Datum = = m + amayunithi:
Futhi ngicabanga ukuthi manje idla izinsiza eziningi, inqubo izwa kancane kancane, kule ndaba baye bamemezela ukuthi kuzoba nokuthuthukiswa endabeni yokwakhiwa ... futhi bekufanele babhekwe.
Singacabanga ukuthi le nguqulo izonikezela okuningi, ngoba ukusebenza okunye kuhlanganiswa kancane kancane futhi kuthatha ukuvuthwa.
Kuyaqondakala ukuthi lokhu kuyinto inguqulo kwecala, futhi ngokushesha sizoba version esitebeleni gvSIG 2 ke basuke ixazululwe ukungabaza ziyeza lokuthandwa lwamakheli ... ngenhlanhla ezinye banality elula njengoba lokhu uhlamvu ilahlekile khona.
Phakathi kwezici ezinhle kakhulu, engizikhulume ngazo ngaphambili, ukufakwa kwe-sextant ngokuchofoza okukodwa. Lapha kukhona okuningi, kusukela ekuguqulweni kwedatha kuya ku-vector ekuhlaziyweni kwe-hydrological.
Kodwa okwengeziwe kulokhu futhi:
-Ukufakwa kwe-TIN ukudala imifino yokucubungula ... Ngicabanga ukuthi ungasebenzisa ama-curve ezingeni (... ukuhlaziywa kwe-3D)
Amathuluzi wokuhlaziywa kwenethiwekhi (... ukuhlaziywa kwe-nertwork)
Amathuluzi wokuguqula i-raster kuya ku-vector (... i-arc scan)
... phakathi kwamanye amaningi, okuyinto esizoba nayo isikhathi sokukhuluma
Ukubukeka ... okuningi okumelwe ukwenze
Kusekusengaphambili okuhle abakwenzile, kepha ikakhulukazi ngicabanga ukuthi inkambo yokubuka isithombe ingaba kuhle kwabaklami bemifanekiso ngoba kumele sikhumbule ukuthi "ziyizithonjana" futhi ngenxa yalokho kufanele baveze okuthile, balondoloze ukuhlanzeka okucacayo nobunikazi bebhizinisi.
Ukwenza izithonjana kudinga imibandela edlula ukwenza imidwebo eyinkimbinkimbi kuCorel Draw bese usebenzisa i-Gimp ukuyiguqula ibe izibalo ezingama-64 x 64. Ukusetshenziswa kwemithunzi, ukugqama nemisakazo kufanele kubuzwe ezinkingeni okufanele zithathe kuphela ukuchofoza, ukwenza lula isikhathi esithe xaxa nezithonjana zezithonjana ze- "on mouse over" kungaba ukubheja okuhle.
Ngiyagcizelela, ukuthi akukhona ukuthi umklami ubukeka emuhle ngemisebenzi emihle yobuciko ephendulwe izifanekiso, kufanele sikubone ukuthi kancane kancane besilokhu sinamakhono angcono wokuqhafaza kusukela ama-archaic adalwe ngebrashi yokupeyinta engu-8x kepha akumele sihlukumeze siphambanise umqondo wokuqala ye- "icon"
Kuyinto indiza, cha, inyoni, cha; kungukuthi ... umyalo womyalo
... j *, njengoba bengingacabangi ... uma kubonakala ... kubonakala ... kubonakala kanjani?
Iphrinta, itanki lempi ... lehlulekile, ngumlando
kwenzekani ... ababoni ukuthi kubonakala kanjani njengobunikazi be-microfilming elondolozwe ngaphakathi kwe-cryptographer.
Ngokuvamile izithonjana zibonakala zibe mnyama kakhulu, zinezingqimba ezinamandla kakhulu futhi zingekho ukufana, bheka i-spline ngokuqondene nezinye izinto zokudalwa. Futhi akucatshangwa ukuthi bazobukeka kanjani njengesikrini esinokulungiswa okuphakeme futhi ngakho-ke isayizi encane isetshenziswa.
Kunezikhathi lapho kufaneleke khona ukufana nemibuthano eyamukelwe, efana ne- "undo" ne "redo" kunokukwenza lemicibisholo yokuhambisa ... * xtrax, kanye nomngcele we-orange ...
Thanda ukuthuthukiswa ikhompyutha, functionalities kunezelwa i design jikelele, iconography kufanele ucabangele ebunikazini ... uma kungenjalo, izobukeka sikakhusimusi esiye uhlanganyela imifanekiso ngaphandle nenqubo eziyisisekelo ezifana ngokuvumelana, wesimethri noma ukunyakaza.
Kodwa hey, ukwamukela konke okuhle ukuthi le nguqulo ithembisa.
Thumela Previous«Langaphambilini I-AutoCAD Civil Solutions 3D, ye-urbanbani
Post Next Mayelana nezingoziOlandelayo "
Izimpendulo ze-7 "Ukuhlola nokugxeka i-gvSIG 1.9"
Angazi, anginawo ubuntu, kodwa ngicabanga ukuthi ibhekisela kulokho esikwenzayo emafasiteleni lapho sakha isihloko esiyinkambiso yamafasitela.
ngenza kanjani ukucima imiphumela emibi ????
I-Gostaria ukwazi ukuxhuma i-duas linhas no gvsig (akukho i-AutoCAD ekhona umyalo wokucacisa).
Nginenkinga efanayo noLuis futhi ngemva kokuvala yonke imiphumela emibi esebenzayo.
Luis Puente uthi:
Ngifake inguqulo ye-1.1.2 (kusukela ku-1.1 kuya phambili) naku-1.9 ku-Ubuntu 9.1 Karmic futhi lezi zinto zenzeka nje:
1. Isingenisi asisebenzi kudeskithophu noma asiyenzi.
I-2. Amafasitela awaqali ukuze ngisho nefasitela leMenenja yeProjekthi lingaboniswa.
I-3. Kukhona amawindi abonisa kuphela iwijethi futhi akukho okuqukethwe kokuqukethwe.
Kuyini futhi kuyoxazululwa kanjani?
I-PS ngisebenzisa i-COMPIZ kusixhumi esibonakalayo se-graphical.
Siyabonga ngokuyeka lapha futhi sikhuthaze usuku oluyinkimbinkimbi ... akusijabulisi ngaso sonke isikhathi.
Sizobe sibheke ukuthuthukiswa kwesistimu futhi ngokushesha sizokwazi ukuyikhuthaza ngoba ngokuqinisekile iyoba ithuluzi eliyigugu njengoba ukusetshenziswa kwalo kusakazwa.
: p ngiyaxolisa ngokubhuqa.
Siyaqaphela wonke amazwana akho futhi sinethemba lokuthuthukisa kulezi zici. Yiqiniso ukuthi yiyinye yezici ukuthi iphrojekthi ilinakekele kancane, yingaleso sizathu iqembu elisebenzayo lenziwe, ngaphakathi kwiphrojekthi, ukutadisha ukusebenziseka nesitayela sesicelo.
Ezinye izinto ozikhulumayo zinezizathu zazo zokuba khona, isibonelo isithonjana somugqa womyalo siyizinga elijwayelekile, empeleni yilo elisebenzisa i-gnome / ubuntu ukuqala ukuphela. Ezinye izinto, njengokungalingani kwezimpawu, ukuxuba ezintsha nezindala-okufanele sizilungiselele esikhathini esizayo-, njll.
Siyabonga ngokuzama i-alpha entsha nokubeka amazwana kokuvela kwakho!